FRP Series မှာ - တရုတ် HEBEI TOP-metal ငါ / E ကို
HEBEI TOP-metal ငါ / E ကို CO ။ , LTD မှ
API ကို 5L PSL1 & PLS2 ပိုက်ဆောင်းပါးတွဲ
သံမဏိပိုက်လုံးနို့သီးခေါငျး & Socket
API ကို 5L LINE ပိုက်ပြဿနာ
FRP wrinding ပိုက်ကိစ္စတွင်
စတင်ရုပ်သံလိုင်း dradging ကိစ္စတွင်
ပိုက် fittings ကိစ္စတွင်
PER Draw ထောက်ပံ့ AS အကောက်ခွန်ထုတ်ကုန်များ
စတင် Series မှာ
FRP Series မှာ
PTFE ကှနျ့ပိုက် Series မှာ
API ကို 5L ပိုက် Series မှာ
အဘယ်သူမျှမပြည်တွင်းရေးမဟုတ်သလိုပြင်ပချေးလည်းမရှိအဖြစ် FRP / GRP ပိုက်၏သကျတမျးကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, တစ်ချိန်ကသင့်လျော်သောဗဓေလသစ်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွအေနအေရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ် & သင့်လျော်စွာသင်အလွယ်တကူ 15-20 နှစ်အထိတစ်သကျတမျးမြျှောလငျ့နိုငျပြင်ပမှထောက်ခံသည်။
ဒါဟာဆားရေ & အရည်မှ alkaline များဓာတုပစ္စည်းကနေခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ်ဖို့အားနည်းနေဘို့သင့်လျော်သည်။
ပြင်ပ epoxy အပေါ်ယံပိုင်း၏အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်။
အဆိုပါ FRP ပိုက်၏အလေးချိန်သယ်ဆောင်သွား & လျှော့ချစိုက်ထူကုန်ကျစရိတ်သို့ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူအရှင်အလွယ်တကူသက်ဆိုင်ရာက MS သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ပိုက်ထက်အများကြီးနည်းပါးသည်။
ဒီစနစ်ဂုဏ်သတ္တိများအလေးချိန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ အလေးချိန်၏တစ်ယူနစ်အစွမ်းသတ္တိ၏အချိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း GRP / FRP ဖွဲ့စည်းမှုသံ, ကာဗွန်နှင့်သံမဏိထက်သာလွန်။
ပစ္စည်း သိပ်သည်းဆ (ဆ / cm³) ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (MPA)
ကျဇယားသံ 7.6 420
သံမဏိ 7,83 1034
ပိုက်အထူးမီးတိုက်ပွဲ application များအတွက်မီးနှောင့်နှေးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယင်းပိုက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချဖို့ inorder စက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ပျော့သံမဏိပိုက်ထဲမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်သောကြောင့်ချေးဖို့ lekage ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲစနစ်အတွက်အလိုရှိသောဖိအားရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာမီးဖမ်းမီးနှောင့်နှေးဗဓေလသစ်ကနေဖန်ဆင်းတော် FRP / GRP ပိုက်ကိုသုံးနိုင်သည် ။
အောက်ပိုင်း PN ratings & နိမ့်အရွယ်အစားအဘို့အကြိုက်သော
သေးငယ်တဲ့ပမာဏများအတွက်အလွယ်တကူ လုပ်. ရနိုင်
ကြီးမားသောအချင်း & မြင့်မားသော PN ratings အဘို့ကောင်းသော
လက်ကို တင်. -အထိနှိုင်းယှဉ်ပါကထိရောက်သောကုန်ကျစရိတ်
1.For ပြည့်စုံ FRP / GRP ပိုက်
Butt & သိုင်းကြိုးနည်းလမ်း
Fixed အနားကွပ် Bolt အစီအစဉ်
ချောင်အနားကွပ် Bolt အစီအစဉ်နှင့်အတူ Stubend
ပြီးပြည့်စုံသော thermoplastic ပိုက် 2.For
မှန်စက်သုံးပြီး welding Butt
3.Thermoplastic + FRP / GRP ပိုက်
FRP / GRP များအတွက်စက် / လက်စွဲစာအုပ် + Butt & သိုင်းကြိုးသုံးပြီး welding Butt
solvent ဓာတုပစ္စည်း + FRP / GRP
ယခင်: PTFE ကှနျ့ပိုက် Series မှာ
နောက်တစ်ခု: စတင် Series မှာ
သွပ်ရည်စိမ်ပိုက် fittings NPT ချည် socket
140mm 3LPE အင်္ကျီ gost 8732-78 ချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်
ကာဗွန်သံမဏိအမျိုးသမီးချည် socket / နားချင်းဆက်မှီ
6 ထပ်, Block ကိုတစ်ဦး, Zhongliang Hebei ပလာဇာ။ No.345 Youyi မြောက်ပိုင်းလမ်း, Shijiazhuang, Hebei, တရုတ်။